तलब काटने प्रहरीको होइन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको बाट २५ प्रतिशत घटाऔं
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको २५ प्रतिशत तलब कटौती गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्न नहुने उनको सुझाव छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लोहनीले उच्च राजनीतिक आहोदामा बसेकाहरुको एक वर्षको तलब २५ प्रतिशत घटाउने हो भने महामारीविरुद्ध लड्न आर्थिक अभाव नहुने बताए ।
यसो गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुने उनको आकलन छ । पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले भने, ‘राष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका सबै पदाधिकारीहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब र भत्ता एक वर्षको २५ प्रतिशत काटियो भने पैसाको कमी हुँदैन । साथै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम पनि महामारीविरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने डा. लोहनीको प्रस्ताव छ । उनले भने, सांसद् विकास कोषको रकम यतापट्टि लगाउनुपर्छ ।
सांसद विकास कोषको रकमबाटै ३ / ४ अर्ब आउँछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको तलब नकाटी साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मात्र कटौती गर्न नमिल्ने डा. लोहनीको तर्क छ । उनी भन्छन्, कर्मचारीहरुको तलब नकाट्नोस्, प्रहरीको पनि काट्नुहुँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले विकास बजेट कसरी परिचालन गर्ने र खाद्यान्नको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति April 10, 2020
एमसीसी पास गर्ने पक्षमा काँग्रेस, एमसीसी कुनै हालतमा रोक्न हुन्न: देउवा
होटल मेरियटबाट अहिले निर्माण भएको धरहरा हेर्दै ओली र नेपाल (हेर्नुहोस तस्बिर)
काँग्रेसले भन्यो: अब केही दिनभित्रै मुलुकको राजनीतिले यसरी कोल्टे फेर्छ (सक्दो सेयर गर्नुहोस)
हिजो कता थियौं छाडिदिनुस, आज के सत्य हो त्यो महत्वपूर्ण: टोपबहादुर रायमाझी
एमसीसी नेपालको हितमा आएको परियोजना भएकाले पास गर्नुपर्छ: डिला संग्रौला
प्रचण्ड दक्षीण एशियाकै राजनेता हुन, उहाँ बिना देश बनाउन सकिदैनः ऋषि धमला
बधाई छ !!! प्रधानमन्त्री ओली एसियाको भविष्यका नेता छनौट (सक्दो सेयर गर्नुहोस)
भारतमा राजा बन्न गएका ज्ञानेन्द्रलाई, नेपाल आउन रोक लगाउनु पर्छ: आङकाजी शेर्पा
टोपबहादुर रायमाझी भन्छन: म यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भैसकेँ
टिकटक भिडियो बनाउन पुलबाट नदीमा हाम्फालेका सञ्जय वेपत्ता (भिडियो सहित)
अलिकती मनमा दया छ भने plz फोटोमा छोएर RIP लेखिदिनु हाेला